बेलाबेलामा आफ्ना गल्ला भनेर भेट्न आइरहन्छन्
बाबा पदमध्वज लिम्बू र आमा कालीमती लिम्बूको कोखबाट १९९१ सालमा माइला छोराको रुपमा जन्मिएका हुन् रामप्रसाद लिम्बू । पुख्र्यौली घर पाँचथर फिदिम नगरपालिका सिवा–१ भई हाल उनी बेलायतको अक्सफोर्ड सायरमा बसोबास गरिरहेका छन् । सिनियर सिटिजनसिप अथवा पाँचथरमा लामो समयसम्म गल्लाको काम गरेर धेरैभन्दा धेरै पाँचथरे गोर्खा सैनिकहरुको प्यारो कर्णधार गल्ला बनेका छन् भूपू गोर्खा आर्मी नम्बर २११८०२३१ रामप्रसाद लिम्बू । प्रस्तुत छ, उनै पूर्वगोर्खास“ग एभरेष्ट टाइम्स साप्ताहिकका लागि जानू काम्बाङ्ग लिङ्गदेनले गरेको रमाइलो कुरोकानी ।
तपाई बेलायत आउनुभएको कति समय भयो ?
म २०१२ सालको सेप्टेम्बर ६ गते यहाँ आइपुगेको हुँ ।
आउनेबित्तिकै कहाँ बस्नु भयो ?
सुरुमा बेजिङस्टक केहीदिन बसियो । त्यसपछि स–परिवार अक्सफोर्ड आइयो, केहीदिन बसेको के गन्ती भो ।
पेन्सन कुन सालमा जानु भो र पेन्सन जाँदा तपाईको पल्टन कहाँ थियो ?
म १९६८ साल (नेपाली २०२५)मा पेन्सन गएको हुँ । त्यो बेला मेरो पल्टन ब्रनाईमा थियो ।
तपाई कुन पल्टनमा हुनुहुन्थ्यो ?
म क्विन्स गोर्खा ईन्जिनियरमा थिएँ । हाम्रो पल्टनको काम नै घर बनाउने, मर्मत गर्ने, पुल निर्माण गर्ने, कतै लडाइँ छ भने लडाकुहरुको आवश्यक चिजहरु तयार गरिदिने आदि ।
जागिर कति वर्ष खानु भयो ?
म भर्ती भएदेखिको समय गिन्ती गर्दा त १८ वर्ष हुन्थ्यो तर मलाई २ वर्ष बोई भर्तीको समय काटेर १६ वर्षको मात्र पेन्सन दियो बजियाहरुले ।
जागिरमा बस्दाको बिर्सनै नसकिने कुनै पल छ ?
त्यस्ता पल त कति छन् कति । त्यो बेलाको लामो कालखण्डमा कति के–के गरियो गरियो, बिर्सें पनि यतिका वर्ष बितिसक्यो । लडाइँचाहिँ हामी एचक्वी ट्रिपमा भएकाले फिल्डमा जानु पर्दैन थियो । हाम्रो पालामा त्यति लडाइँ पनि भएन भन्दा मलायामा बेण्डितहरुसँग लड्नु प¥यो । अरु पल्टनहरुले, बेण्डित भनेका माओवादी जस्तै हुन् मलायाका । त्यहाँका सरकार विरोधीहरु हुन् ।
बेलायत आएर बस्दाका कुनै तीतो मीठो अनुभव सेयर गर्नुस् न ?
यहाँ सबै राम्रै लागेको छ । औषधि, पानी फ्री दिएकै छ । बेनिफिट पनि उपलब्ध गरेकै छ, बालबच्चा हुनेले पढाइरहेका छन्, यो भन्दा अरु धेरके चाहियो र हामीलाई । म त सबै ठीकै देख्छु ।
पेन्सन गएपछिको लामो समय कसरी बिताउनु भो नेपालमा ?
म भर्खरकै थिएँ । पुगेर केही वर्ष घरैमा बसियो । त्यसपछि २०३४ देखि ३८ सालसम्म खानेपानीमा काम गरियो । पेन्सन थोरै घरमा खेतीपाती उतार्न र परिवार पाल्न पनि नपुग्ने त्यसैले जागिरको पैसाले थोरै नुन, तेलको खर्च टाथ्र्ये । पछि फेरि त्यो काम पनि छाडेर ९ वर्ष जति पाँचथरमा गल्ला गरियो । थुप्रै केटाहरु भर्ती लागे मेरो पालामा । जेहोस् त्यो दिनहरु अहिले सम्झिंदा रमाइलो लाग्छ ।
तपाईले भर्ती हालेका केटाहरु कति जति छन् हालसाल बेलायतमा ?
अहिले यहाँ मैले भेटेका, मलाई भेट्न र खोज्न आउनेहरु सबै गरी ४० देखि ५० जनाको हाराहारीमा हुनुहुन्छ । बेलाबेला आफ्ना गल्ला भनेर भेट्न आइरहन्छन् ।
बेलायत सरकारले भूपूहरुलाई कतिको सुख सुविधा दिए जस्तो लाग्छ अथवा तपाईहरु कतिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ ?
टन्न पैसा बचाउन पुग्ने त दिने कुरै भएन । जेहोस् खान, बस्न पुग्ने दिएको छ । घरभाडा तिरिदिएकै छ, भोकै बसिएको छैन । यति होला अब बुढेसकालमा आफ्नै देशमा बस्दा पनि थोरै पेन्सन दिएकै थियो, अब सन्तुष्ट नै मान्नु पर्छ यतिको ।
उहिले र अहिलेको पल्टने जीवनमा के फरक पाउनु हुन्छ ?
आम्मइनी ! नानी धेरै नै फरक छ ! हाम्रो पालामा म रु १० तलब थप्थें, पछि १८ वर्ष जागिर खाँदा खाँदा पेन्सन जाने बेला बल्लतल्ल नेपाली रु ६०० भएको थियो । तर त्यो बेला पैसाको धेरै महत्व थियो । धेरै जिनिस आउँथ्यो । अहिले दुनियाँ सुखशयल छ, सुविधा छ तर पैसाको मूल्य छैन । रु १००० ले केही आउँदैन त्यसैले म, मेरो पालाको समयलाई पनि सल्युट नै गर्छु
जसले हिँड्न सिकायो र अहिलेसम्म बच्ने सहास र बल ताकत दियो । हामीले हाम्रै समय जियौ, अहिलेकाले अहिलेकै समय जिउछन् फरक फरक धारमा अलग अलग जीवन सबैले बाँच्ने मौका पाइयो ।
तपाईलाई बेलायत बस्दाको असुविधा लाग्ने पक्षचाहिँ कुन हो ?
अब त्यो त छ नि । अर्काको देश, त्यो पनि बूढेसकालको बेला । सबभन्दा असुविधा त भाषा हो । जो हामीजस्तो उमेरका सबैले भोगिरहेका छौं । आफ्नो पढेलेखेका छोराछोरी ल्याउन पाउनेले त्यही हिसाबले जिन्दगी बिताइरहेका छन् । मेरो मतलब सम्पूर्ण काम छोराछोरीले गर्लान् तर जो छोराछोरीबिना यहाँ आउनुभएका छन् उहाँहरुलाई त कागजपत्रका कामदेखि लिएर हस्पिटल, बैकिङ्ग, बेनिफिट हरेक काममा सहारा चाहिन्छ, अरुलाई कति गुहार्नु । उमेरका मान्छे सबै काम गर्छन् । जहिले भ्याउँदैनन् । समस्या छ यो मामलामा चाहिँ नढाँटी भन्नुपर्दा ।
तपाई आफ्ना यस्ता असुविधाहरुलाई कसरी समाधान गरिरहनुभएको छ ?
साना तिना कामहरु त छोराहरुले गर्छन्, अलि ठुल्ठुला कामहरु त यहीका नेपाली कम्युनिटीका र एकजना साफाका मेम्बर भाइ हुनुहुन्छ कृष्ण फेम्बु । उहाँले गर्नुहुन्छ । कृष्ण फेम्बु मेरै पल्टनको केटा हुन् यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण भूपूहरुको कागज पत्रदेखि लिएर घर खोजिदिनेसम्मका सम्पूर्ण काम गर्नुहुन्छ । उहाँ एकजना हाम्रो लागि नभई नहुने व्यक्ति हुनु हुन्छ ।
तपाई यति स्वास्थ हुनुहुन्छ अझै मज्जाले हिँड्डुल गर्न कुनै समस्या छैन, यसको राज के हो ?
मेरो कुनै बिमार त छैन । यहाँ धेरै साथीभाइहरुको मेक्सिमको सुगर छ तर ममा सुगरचाँहि छैन । भर्खर भर्खरदेखि प्रेसरको दबाईचाहिँ खाँदैछु । राज त अब पेन्सन निस्केर धरान मधेसतिरै बसेको भए सायद अहिलेसम्म बाँचिँदैन पनि थियो कि ! तर पहाड गाउँघर माया मार्न सकिएन र उतै बसियो हावापानी राम्रो खानेकुरोहरु अर्गानिक । त्यसैले पनि होला भन्छु ।
बेलायत आएर नेपाल कतिपल्ट जानुभो ? अनि अहिले तपार्इंहरुलाई २८ दिनभित्रै बेलायत वापस आईसक्नु पर्ने नियम बनायो नि ? त्यो कतिको ठीक या बेठीक लागेको छ ?
म यहाँ आएर जम्मा १ पल्ट गएँ । त्यो पनि गाउँतिर पुगिनँ । काठमान्डूसम्म मात्र पुगेर फर्किएँ । अब यो समय छोट्याएकोमा त कोही पनि खुसी छैनन् होला मलाई लाग्छ, किनभने सबैको घर धरान मधेस या काठमान्डू हुँदैन । म जस्तै पहाडी जिल्ला पुग्नु पर्नेहरुलाई त २८ दिनले पुग्दैन । फेरि हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट र राजनीतिक उथलपुथल जहिले उस्तै हो । कहिले नेपाल बन्द, कहिले बाढी पहिरो, अब यस्तो अवस्था झेल्दै सोचेको ठाउँसम्म पुग्न त कम्तीमा पनि डेढ महिनादेखि २ महिनाचाहिँ पाउडर बनाउन पाए हुने थियो जस्तो लाग्छ ।
अब अन्त्यमा आफूलाई भन्न मन लागेको कुरो या अहिलेका नयाँ पुस्तालाई केही सन्देश छ ।
सर्ब प्रथम त यो पत्रिका एभरेष्ट टाइम्सका सञ्चालकहरु अनि नानीलाई म धेरै धेरै आशीर्वादसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो पत्रिका म हरेक हप्ता पढ्छु । मेरो घरमै झर्ने गरी मेम्बर बनेको छु । म, म जस्तै अरुलाई पनि पढ्न अनुरोध गर्दछु । यो पत्रिकाले धेरै खबरहरु लेखेको हुन्छ र बुढेसकालको टाइम पनि पास हुन्छ ।
अब नयाँ पुस्तालाई त के भनिरहनु पर्छ र सबै जान्ने बुझ्ने छन् जमाना अनुसार, तैपनि यति भन्छु हामी जहाँ रहे पनि नेपाली हौ्र, नेपाल नभूलौं आफ्नो मातृभूमि र माटो नभुलौं । विदेश भनेको जति सुख, सुविधा सम्पन्न भए पनि उहिले हामी मावला गएजस्तै हो मायासम्म मात्र हो । पाहुना मात्र हौँ हामी । त्यसैले देश झुक्ने काम नगरौं स्वाबलम्बी बन्न सकौं भाष, संस्कार संस्कृति जोगाऔं । सबैलाई आशीर्वाद ।